Fusarium | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny aretina voalohany amin'ny azaleas sy ny fitsaboana azy ireo
Azalea (latina azalea) dia zavamaniry tsara tarehy avy amin'ny foko Rhododendron ao amin'ny fianakaviana Heather. Ny mpiblaoka voninkazo dia mankasitraka ny fahasamihafana eo amin'ny felany maniry, maniry amin'ny ravina maitso mavana. Na izany aza, azalea ihany koa ny azalea amin'ny tompony, noho ny fisian'ny aretina goavana sy ny fanafihan'ny bibikely.
Ahoana no hananana coreopsis eo amin'ny faritra misy ahy?
Ny fototeny flower flower dia nofaritana amin'ny anarana hoe voninkazo kely na rameva. Io zavamaniry isan-taona io dia mandefitra ny tsy fahampian-tsakafo ary maniry mandra-pahatongan'ny voaloboka voalohany. Coreopsis dia tranon'ny tropikan'i Afrika, Amerika Avaratra ary Hawaii. Ny zavamaniry dia mahatratra 1 metatra ny lavany. Ny voninkazo tsara tarehy amin'ny diam-penina dia mitombo hatramin'ny 10 cm.
Ny fomba hikarakarana ny sira any an-trano
Manampy ny orkide tianao indrindra - maninona no mivadika mavo ny peduncle ary inona no ifandraisan'izany?
Ahoana ny fandroahana ny dracaena?
Torohevitra mahasoa momba ny fambolena serizy
Inona no mamaritra ny fotoam-pamokarana Daykon? Rahoviana vao hamboly amin'ny faritra samihafa ao Rosia?
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fusarium